Xournalpp: software yekutora zvinyorwa nemaoko uye kuendesa kune digital | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | GNU/Linux, Zvirongwa, Resources
Chokwadi unoziva zvirongwa zvakaita seKusavimbika, OneNote, nezvimwe, asi pamwe hauzive chirongwa cheXournalpp. Anwendung yaunogona kutora manotsi neruoko kuti unyore zvinyorwa zvako mumadhijitari nenzira yakapusa. Chinhu chinonyanya kushanda kutora manotsi mukirasi, kana kunyora chero chinyorwa kana usiri kugona kunyora.
Xournalpp (kana Xournal ++) inobva open source, yemahara uye yemahara. Izvo zvakanyorwa muC ++, zvichibva paXournal (C kodhi). Muchokwadi, zita rayo rinobva mukubatanidza mazwi Xournal seC Plus Plus. Zvisinei neayo etymology, chirongwa chikuru chinogona kubatsira kwazvo kwauri, uye kuti iwe unogona kuisa pane yako yaunofarira GNU / Linux distro, sezvo iri multiplatform.
Nekusvika kwa denda maitiro akaitwa zvinhu kare zvachinja. Izvo zvakachinja zvakanyanya munzira yatinobatana nayo, mukusimudzira telework, kana kure kure dzidzo. Naizvozvo, Xournalpp inogona kunge iri chishandiso chakanaka chenguva dzino. Semuyenzaniso:
Izvo zvinogona kukubatsira iwe kuti uite pasina mapepa emapepa nekunyora pahwendefa redhijitari kushandura iwo mavara kuita gwaro redhijitari, kuchengetedza bepa uye kuremekedza nharaunda.
Iwe unogona kutora zvinyorwa nenzira yakasununguka usingashandisi keyboard, zvachose neruoko uye wozokwanisa kuzvigadzirisa mune chero chirongwa chekugadzirisa uye woita kuti magwaro ako ese ekudzidza arongedzwe, ugovagovera, nezvimwe.
Unogona kuishandisa kutora manotsi pabasa rako uye kupfuudza mumadhijitari fomati kuti usapfuure mapepa mapepa uye kuremekedza madaro ekuchengetedza
Chokwadi ndechokuti zvinoshandiswa iwe waunogona kufunga nezvayo ndeakasiyana kwazvo. Iwe sarudza nezve chii! Uye Xournalpp inokupa iyo tekinoroji yekuti sei ...
Ehe saizvozvo, iwe uchazoda imwezve hardwareSezvo ari mahwendefa, asi kune akadhura zvakanyanya. Saka hazvingasanganisiri kuwanda kwekudyara. Semuenzaniso, kune mamwe maWacoms angangoita makumi mana emadhora.
Mamwe mashoko - Shanyira iyo Xournalpp GitHub peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Xournalpp: software yekutora zvinyorwa nemaoko
Iyo yakanakisa software, yakakurudzirwa kwazvo.
Ndatenda zvikuru nechinyorwa!
Fedora 33 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo dzinonyanya kukosha
Maapplication eApple ane malware. Zano rekuzvidzivirira